Hosazina ireo mampiakatra ny vidin’entana: ”Tsy tokony hihoatra ny 1 800 Ar ny kilaon’ny vary” | NewsMada
Hosazina ireo mampiakatra ny vidin’entana: ”Tsy tokony hihoatra ny 1 800 Ar ny kilaon’ny vary”
Par Taratra sur 19/03/2020
Tsy tokony hihoatra ny 1 800 Ar ny kilaon’ny vary eny amin’ny mpanjifa. Handray fepetra hentitra ka hanasazy ireo manararaotra mampiakatra ny vidin’entana ilaina eo amin’ny fiainana andavanandro eny an-tsena ny fanjakana. Fanararaotana noho izao aretina coronavirus izao.
Arahi-maso akaiky ny vidin’entana hiadiana amin’ireo mpanararaotra ho fiarovana ny mpanjifa. Nidina teny amin’ny tsena Anosibe, omaly, mitohy anio, ny minisitry ny Indostria, Varotra, sy asa tanana (Mica), Rakotomalala Lantosoa niaraka tamin’ny minisitry ny Filaminam-bahoaka sy ny Sekretera miadidy ny zandarimaria ho fampiharana ny tapaka tamin’ny Filankevitry ny minisitra ho fiarovana ny mpanjifa. Nojerena manokana ny vidim-bary, ka raha ny kajikajy tokony ho izy, tsy tokony hihoatra ny 1 800 Ar ny kilaon’ny vary. Hita teny an-toerana fa ao ireo mpamongady manana faktiora ara-dalàna sy tahiry ampy, fa ao koa ireo tsy manara-dalàna tsy mametraka vidin’entana, nefa efa nomena fampitandremana tamin’ny fankalazana ny Andron’ny zon’ny mpanjifa.
Mitohy tsy tapaka ny fivoriana miaraka amin’ireo vondron’ny mpandraharaha mpanafatra entana amin’ny Mica. Roa andro nisesy izao, niara-nivory nidinika ny fizahana ny tahiry misy sy ny fifehezana ny varotra mifanaraka amin’izany. Koa raha jerena izay tahiry izay, azo antoka hatramin’izao fa tsy hisy krizy.
Raisina ny fepetra fampiharana ny lalàna, ka izay hita fa tsy ara-dalàna, horaisin’ny fanjakana avy hatrany ny entana hamidy, araka ny vidiny tokony ho izy tsy misy fanararaotana ny mpanjifa. « Ampiharina izany ny sazy ho an’izay mpivarotra manararaotra », hoy ny minisitra Rakotomalala Lantosoa.
Hitsinjo ny vita malagasy
Nandritra ny fivoriana niarahan’ny Mica sy ireo mpandraharaha (Gem sy Sim), nifanaraka izy ireo fa hanohana ny indostria malagasy, hamokatra ny vita malagasy, hitsinjo ny mpanjifa ho fampirisihina azy ireo hanjifa ny vita malagasy. Harahi-maso manokana, noho izany, ny fivarotana ny vary vokatra eto an-toerana.
Ampy mandritra ny enim-bolana ny tahirin-tsakafo ilaina andavanandro eto amintsika ary tsy misy fisakanana ny fanafaran’entana amin’ny alalan’ny sambo na ny fiaramanidina cargo, araka ny fanamarihan’ny Mica.